ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး, ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး, တရုတ်အတွက်တည်ငြိမ်သောခွေးရူးကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူ၏နူးညံ့ bulk ၏ bulk
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Asia ထုတ်ကုန်: 1% - 10% Cert: GMP ဖေါ်ပြချက်: ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး bulk,ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးအပျော့စားအစုလိုက်,တည်ငြိမ်ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး,,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူ့အသုံးပြုမှုများအတွက်ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး > ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက်
ဗိုလ်လုပွဲအစုလိုက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး bulk, ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးအပျော့စားအစုလိုက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, တည်ငြိမ်ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
လူ့အသုံးပြုမှုများအတွက်ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး၏ bulk (Semi-ချောထုတ်ကုန်)
1. ပြည်တွင်းရေးထိန်းချုပ်မှုများအတွက်စံအမျိုးသားရေးစံနှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အဆိုပါခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးမြင့်မားတဲ့အာနိသင်ရှိပြီးကောင်းသော immunogenicity ရှိပါတယ်။
2. အဆိုပါကာကွယ်ဆေးကိုဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုအတွက်အနိမ့်အချိုးအစားနှင့်အတူကောငျးမှဘေးကင်းလုံခြုံမှုပြသထားတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ထိတွေ့မှုဧရိယာ၌ကြီးမားသောအတိုင်းအတာကာကွယ်ဆေးထိုးဘို့အသင့်လျော်သည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး bulk , ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးအပျော့စားအစုလိုက် , တည်ငြိမ်ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး